Qariiradaha Stitch, si aad u soo dejiso sawirada masawirka Google Earth - Gofumed
Juunyo, 2008 Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah
Maps Tolmada waa codsi ah run ahaantii waa in la dhiso mosaics ee images, sida khariidadaha Rubuca iskaan laakiin sidoo kale u ogolaataa degsado images ka Google Earth iyo u kulmino galay mahrajaan oo markaas la badbaadin karaa sidii hal image a ... wanaagsan sigaar cabbin, maxaa yeelay, ma aha eedeysanuhu ah meedka lagu rakibay. Waxaan xasuustaa markii qaar ka mid ah ka hor waxaan ka hadlay codsiga sameeyey wax la mid ah, laakiin boggii waa la waayay ... waxaan maleynayaa wax khalad ah.
Aan aragno sida Qariiradaha Stitch wax u qabtaan:
1. Xulo sawirka
U sheeg in aan doonayo in aan soo dejiyo qeybtan Google Earth ee magaalada, Stitch Khariidadaha waxay garowsan tahay soo dejinta aan ku leeyahay Google Earth. Ka taxadar, waa inaad isticmaashaa ikhtiyaarka DirectX, ma shaqeynayo OpenGL.
2. Dooro dherer indhaha
Tan darteed waxaan xushay badhanka "Google Earth" iyo nidaamku wuxuu i tusinayaa isla aragtidan oo leh guddi ku taal dhinaca midig halka aan ku dooran karo dhir (nooc ka mid ah soo af-galka Google ee la mid ah dhererka duulimaadka), iyo badhamada qaar si hoos loogu dhigo ama kor loo qaado. dhererkiisu waa boqol ama kun mitir.
Badhanka «goobaha» badhanka waxaan dooran karaa meesha sawirada, cadaadiska iyo walxaha kale ee lagu keydin doono.
3. Muuji maskaxda
Adigoo riixaya badhanka «khariidadaha», daaqad ayaa la soo bandhigayaa meesha ay ka muuqato shaygu iyadoo loo eegayo tirada safka iyo tiirarka laga xushay dhanka midig. Sidoo kale qeybta kore waxaad ku arki kartaa dhererka midkasta oo sawirada lahaan lahaa maxaa yeelay waxay u keentaa il mid walboo ka mid ah… qulqulka matrix, ka yar pixel wuxuu noqon doonaa, sidaa darteed faahfaahinta fiican (maya lahayn).
Inkasta oo lagugula talinayo inaad isticmaasho goobo yaryar sababta oo ah waxay hubaal tahay in Google uu mamnuucayo IP-gaaga mashiinkaaga haddii robotyadu ogaadaan si taxadar leh si nidaamsan. Waxa uu ku sameeyaa kala cayncayn ah, iyo laba maalmood gudahood IP ayaa la sii daayaa.
Adoo xulo badhanka «images», haa nidaamku wuxuu ku soo noqdaa natiijadii hore ee cabbirka ee sawirku ku yeelan doono qaababka bmp, jpg iyo png.
Waxaan dooran karaa ikhtiyaarka lagu kaydinayo sawirada si gooni ah iyo sidoo kale qaabka pixel ee u dhaxeeya 8, 16 iyo 24.
Markaas waxaad si toos ah u dooran kartaa qalab loogu talagalay Ozi, TTQV, GPS Track, Khariidadda Caalamiga ah, Fugawi, World-file, Mapinfo iyo GPSdash2.
4. Qabo sawir sawir
Adiga oo xulanaya ikhtiyaarka "scan", waxaad bilaabeysaa abuuritaanka qabqabashada adigoo muujinaya kuwa lagu qabtay buluug ... waqtigan laguma talinayo in lagu dhexgalo internetka ama codsiyada kale maxaa yeelay durdurku wuu muuqdaa inuu faragelin ku samaynayo.
5. Keydso sawirka
Dhamaadka, sawirku wuu muuqdaa, kaas oo la diyaarin karo adoo ku meelaynaya wareeg ah ama jarista geesaha, tan iyo midigta ayaa ah kantaroolka Google Earth oo ka hooseeya bakhaarka adeeg bixiyaha. Dalag sahlan oo diyaar u ah inuu badbaadiyo.
Sawirka ayaa la keydiyaa iyada oo aan loo baahnayn, laakiin tani waa faylka kalibration, taas oo lagu badbaadiyey mid ka mid ah noocyadaas. Tan waxaa lagu aqoonsaday lambarrada xakamaynta, dhererka, dhererka iyo qiyaasta casriga, xusuusnow in labadii hore iyo labadii u dambeeyey ay yihiin afarta geesood ee sawirka.
Waxaad sidoo kale arki kartaa in image uusan aheyn kareem marka aad aragto isku-duwayaasha dabagalaya. Sababtaas awgeed, waa lagama maarmaan.
Noocka tijaabada ah waa la soo dejin karaa, waxkasta wuxuu ka reeban yahay kaydinta sawirada.
Qaybta lacagta ee Stitch Maps waxay u socotaa $ 48 ... maaha mid xun sababtoo ah waxaad ka iibsan kartaa Paypal ... gaar ahaan hadda kala cayncayn ah Adiga kuma sii jiri kartid Google.
Mashruucan waxaan ku sharraxeynaa qaar dhibaatooyinka caamka ah of Stitchmaps.
Xiriirintaan waxaad bWitch Stitchmpas oo ka soo jeeda Shareit!, inkasta oo aanay u muuqan in ay ka soo baxdo maxkamad; Waxaan u baahan lahaa inaan caddeeyo haddii iibka dhabta ah la sameyn karo.
Google Earth GPS GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous Ku rakib adeega ecwo leh AutoCAD
Post Next Mudo intee le'eg ayaa feylka qaabka noolaanaya?Next »
21 Jawaab in "Khariidadaha Stitch, si ay u soo dejiyaan sawirrada muuqaalka Google Earth"
Isku day aag yar markaa eeg haddii faylka la abuuray. Way suurta gal tahay meeshii la doortay inay aad u weyn tahay, taas oo ka badan xusuusta kombiyuutarka kumana abuuri karo taas.
jefro isagu wuxuu leeyahay:
hi ihave dhibaato u isticmaal khariidadda is dul taagta. dhamaadka badbaadinta sawirka waxay noqon kartaa Cudurka 'Mosaics'. fadlan i hanuuni
MALENA isagu wuxuu leeyahay:
SIDA LOO ISTICMAALAYO VIDEOS
Taban Ruqsadda Stitchmaps mar dambe ma soo socota.
Waad ku faraxsan tahay kuwii soo iibsaday waxayna maalgashiyeen dollarka 49 ee ay u qalantay.
Wax la mid ah waxaa la samayn karaa PlexEarth, inkasta oo aan la simanayn
Aranza isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan iibsado liisan, laakiin ma heli karo meel kasta, qof garanaya halka laga gato, fadlan.
MISANTI isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan kaa caawin karaa dhibaatadan sawirrada hore. Emailkeygu ma imanayo, laakiin waan ku tilmaamayaa halkan, mdangel21@HOTMAIL.com
Ericson: Stitchmaps hadda lama hayo, si naxdin leh.
Agustin: Sug fadhiga, maxaa yeelay isla xariiqda isku midka ah ee aniga ayaa i sugaya 😀
Halkeen ka iibsan karaa liisanka software, Waxaan raadiyey mana aanan helin, fadlan qof kale oo ku siin kara?
Sugitaanka Google si aad u sameyso xawaaraha casriyeynta ee khariidada aagga Ojos de Agua, Comayagua ... khariidadaha hadda lama isticmaali karo ...
Hello Waxaan raadin doonaa jilicsan, laakiin xiriirka ayaa waxyeello u geystay qof ii soo gudbin kara ... Waxaan noqon lahaa mid aad u mahadcelin ...
Iyo inta farqiga u dhaxeeya?
Guys shaqaynayeen Maps dhejiya ah, laakiin waxa ay haatan ka tago ka mid ah taariikhda images, iyo e aan meel kasta bucado dhibaatada aan arko q kale sidaa sameeyaan, laakiin ma arkaan xal, waxaan beddelay oo dhan loo dhan yahay hoos versions kale ee Khariidadaha Google iyo dhejiya ... qof og yahay hirarka in
Xiriirkaagu aad buu gaabis u yahay. Xusuusnow in Stitchmaps ay qabato shaashaddaada, sidaa daraadeed waxay qabaneysaa wixii ay aragto, haddii daaqad jirto, haddii aad leedahay barnaamij kale oo furan bartamaha shaashadda, way qabaneysaa.
Dari kasta oo daaqada xitaa qashin-saarid ka baxsan qabashada.
Waxaan markii ugu horeysay isticmaalay stichmap markii ugu horeysay, waxaanay raaceen talaabooyinka lagu tilmaamay boggan iyo kuwa kale halkaa looga faaloodo.
Si kastaba ha ahaatee marka ugu dambeyntii aan kaydsado sawirka waxaan heli doonaa daaqada GREEN.
Waxaan isku dayay inaan soo dejiyo sawir ka mid ah 6 6, waxay ku timid miisaanka ilaa 50 Mb.
Qalbigga sida loo soo jeediyay, waxaan ku badbaadiyey qalabaynta iyo marka wax walba u muuqdaan inay si fiican u socdaan waxaan ku helayaa sawirka cagaaran sida haddii aanan waxba qabsan.
Muuqaalka cagaarka ah wuxuu ka kooban yahay dhammaan qulqulka aagga aan ku soo arkay sawirka 36 ee soo dejinta iamgenes ee ay ahayd in la sameeyo. Gudaha xagal walba farriin ah 'Loading Googloe Earth' ayaa muuqanaya (farriintan waa lagu celcelinayaa mid kasta oo ka mid ah durisyada, lafaha 36 jeer).
Fadlan, waxaan ubaahanahay caawinaad si aan u xalliyo dhibaatadan
Fabiola isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid, ma soo dejin karo stitchmap ... Ma qof baa i caawin kara?
Haa, waxa aan arkaa, boggu wuxuu ku jiraa xaalad gaar ah. Laakiin softiweerka wali waxaa lagu iibsan karaa Shareit.
Waad ku mahadsan tahay Si wax ku ool ah ayaan u helay inay wadaagaan. Laakiin waa inaan dalbaday in ay awood u yeeshaan xiriirka ay i siiyeen.
Waxaan u maleynayaa inay kaliya tahay dayactir.
Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa iyada oo la wadaagi karo!
Websiteka ma jiro hadda. Hab kale oo lagu helo barnaamijka iyo liisanka?
Hi Henri Sidii aan horayba u soo sheegay, StitchMaps wuxuu u qalmaa $ 48, xulashada muuqaalka keydinta waxaa la sameyn karaa oo keliya marka la iibsanayo shatiga.
Henri Donaire isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan sameeyaa dhamaan tallaabooyinka lagu caddeeyey caawimadooda, laakiin dhamaadka, ka dib marka ay fuliyaan SCAN, ma dhaqaajiso ikhtiyaarka SAVE.